निर्मला हत्या प्रकरणः मुख्य आरोपी भनिएका विष्ट हाजिरी जमानीमा छुटे - समाज - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
निर्मला हत्या प्रकरणः मुख्य आरोपी भनिएका विष्ट हाजिरी जमानीमा छुटे
विद्यानाथ अधिकारी काठमाडौं भदौ २६
निर्मला पन्तको हत्यारा दावी गरिएका बिष्ट (कालो मास्क लगाइएका)
कञ्चनपुरकी बालिका निर्मलाको बलात्कार र हत्याका मुख्य आरोपी भनेर प्रहरीले सार्वजनिक गरेको दिलीपसिंह विष्टको डिएनए मेल नखाएपछि अदालतको आदेशमा रिहा भएका छन्।
निर्मला पन्तको भेजाइनल स्वाब (योनीभित्रको तरलबस्तु)मा रहेको बलात्कारीको डीएनए र दिलिपसिंह विष्टको डीएनए फरक भएको पाइएको हो। विधि विज्ञान प्रयोगशालाले दिलीपको डीएनए नमिलेको रिपोर्ट कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा पेश गरेको थियो।
डीएनए नमिलेपछि दिलीपलाई आजै हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न अदालतबाट आदेश भएको जिल्ला सरकारी वकिल खेमराज भट्टले नेपालखबरलाई बताए।
यस्तै, बम दिदीबहिनीलाई पनि हिरासतमुक्त गर्न कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आदेश दिएको छ। दिदी बबितालाई तीस हजार रुपैयाँ धरौटी र बहिनी रोशनीलाई विना धरौटी छोड्न आदेश भएको जिल्ला सरकारी वकिल भट्टले जानकारी दिए।
निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको २६ औं दिन भदौ ४ गते विष्टलाई प्रहरीले मुख्य आरोपीका रुपमा सार्वजनिक गरेको थियो। तर, प्रहरीले घटना अन्यत्रै मोड्न मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका दिलीपलाई मुख्य आरोपी बनाएर सार्वजनिक गरेर फसाउन खोजिएको भन्दै महेन्द्रनगरमा आन्दोलन चर्केको थियो। प्रहरीले वास्तविक अपराधी उम्काउन विष्टलाई फसाएको स्थानीय र पीडित परिवारले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
यद्यपी दिलीपको मानसिक सन्तुलन बिग्रेको नदेखिएको भट्टले बताए। दिलीपलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि काठमाडौं ल्याइएको थियो। शिक्षण अस्पतालमा १० दिनसम्म राखेर स्वास्थ्य परीक्षण गरिएका विष्टलाई अघिल्लो शुक्रबार महेन्द्रनगर लगिएको थियो। उनलाई आइतबार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले चार दिनको म्याद थपेको थियो।
दिलीपलाई उनका दाजु खडकसिंह विष्टको जमानीमा छोडिएको र बबिता र रोशनी बमलाई बाबु दिपेन्द्रबहादुर बमको जिम्मा लगाइएको कञ्चनपुरका डिएसपी कृष्ण ओझाले बताए।
दिलीपलाई छाडेपछि गरीबले पनि न्याय पाउँदो रहेछ भन्ने आभाष भएको दाजु खडकसिंहले बताए।
नेपालखबरसँग कुरा गर्दै उनले दिलीपलाई जवर्जस्ती फसाउने षडयन्त्र असफल भएको बताए। अब निर्मलाको परिवारले पनि न्याय पाउने आशा जागेको खडकको भनाई छ।
प्रकाशित २६ भदौ २०७५, मंगलबार | 2018-09-11 17:23:04
विद्यानाथ अधिकारीबाट थप
कम्युनिस्ट पार्टीका दुई ‘मोहन’ को ६१ वर्षे अनौठो मित्रता
निर्मलाका आमा–बुवा भन्छन्ः 'डमी' अपराधी खडा गर्ने एसपी विष्टमाथि कारवाही हाेस्
निर्मला हत्याकाण्डः बेहोसीमै टिचिङ सारिए खुट्टा काटिएका अर्जुन, अवस्था गम्भीर
निर्मला पन्त हत्या प्रकरण: छानबिन समितिका केसीलाई मार्ने धम्की दिने को हो?
विष्टलाई चार दिनको म्याद थप, ‘मानसिक अवस्था र यौन उत्तेजना’ सम्बन्धी प्रतिवेदनमा के छ?
स्वास्थ्य परीक्षण गरी ल्याइएका दिलीपले दाजुसँग भने ‘निर्दोष छु, मलाई बचाउनुस्’
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कञ्चनपुरबासी रुष्ट
बेड नम्बर ४०८ मा अझै बेहोस कञ्चनपुरका यी घाइते
कञ्चनपुर आन्दोलन स्थगनअघि बैठकमा चर्काचर्की, नयाँ छानविनमा नयाँ तथ्य फेला
‘जापान विश्वले आफ्ना प्रधानमन्त्रीको नाम सही भनोस् भन्ने चाहन्छ’